भर्खरै दशैं सिद्धियो । महान् चाड दशैं लगायत अन्य चाडमा ज्वाइँलाई ससुरालीमा विशेष महत्व दिने गरिन्छ । र, यो महत्वको निर्धारण दिने दक्षिणा, खुवाइने परिकार एवं गरिने आतिथ्यताले हुनेगर्छ ।नेपाली समाजमा ज्वाइँलाई उच्च दर्जाको सम्बन्धमा राखिन्छ भन्दा फरक नपर्ला । ज्वाइँहरू पनि ससुराली जाँदा सुटेडबुटेड भएर अलि भलाद्मी जस्तो देखिएर जान्छन् ।
ढलेको सिन्को समेत उठाउँदैनन् ज्वाइँहरू ससुरालीमा । र, उठाउन दिइँदैन पनि । सामान्यतः खाएको थालमा चुठ्ने अनि गफमा मस्त हुने बाहेक अरु थोक गर्दैनन् । ‘ससुराली गैरन्थे दिनका दिन, साली माग्दा सासूले लखेटिन्’ जस्ता अनेक गीतहरूले प्रष्ट हुन्छ ज्वाइँले ससुरालीमा साली जिस्काउन पाउने समेत छूट रहेछ । काम केही गर्न नलाएपछि त मानिस उपद्रो गरिहाल्छ नि ।
तर तिनै ज्वाइँहरू ‘घरज्वाइँ’ बनेर बस्नु परेको खण्डमा आफूलाई हेपिएको र तल्लोस्तरको भएको आकलन गर्ने गर्छन् । के ज्वाइँहरूको कुनै अभिभारा हुँदैनससुरालीको टेको बनेर बस्न ? वा दुई दिनको पाहुना बन्न मात्र जन्मिएको हुन्छ यो सम्बन्ध ? चिरफार गरौं ।मेरो छिमेकी दाइ-भाउजूका दुईजना छोरी–छोरी छन् । दुवैको बिहे भइसक्यो । अहिले ज्वाइँको आडभरोसाले नै घर चलेको कथा सुनाउँछिन् भाउजू ।
पहिला दुवैजना छोरीछोरी हुँदा तेस्रो सन्तानका रूपमा छोरा पाउन दाजुले भाउजूसँग कर पनि गरेका थिए रे ।
Previous चार वर्षअघि पराजित वडाध्यक्ष पुन: मत गणना गर्दा विजयी
Next सपनाको फेसबुक हाक भयो